Accueil > Gazetin'ny nosy > Lehiben’ny mpanohitra : Veloma hatreo ny nofinofin’i Marc Ravalomanana
Lehiben’ny mpanohitra : Veloma hatreo ny nofinofin’i Marc Ravalomanana
Tao anatin’ny roa taona izao dia niady mafy ny ho lehiben’ny mpanohitra ingahy Ravalomanana Marc izay filohan’ny repoblika taloha. Ny lalàmpanorenana amin’izao repoblika faha –IV dia milaza fa ny lehiben’ny mpanohitra dia tendrena ho filoha lefitrin’ny Antenimierampirenena faha-7.
Omaly alakamisy faha-27 may 2021 dia nolanian’ny antenimierandoholona ny tolo-dalàna natolotrin’ny Antenimierampirenena mahakasika ity raharaha ity. Lany tamin’izany fa ny filohan’ny mpanohitra dia olona tsy maintsy depiote amperinasa ary avy amin’ny mpanohitra. Mazava izany ny resaka hatreto mahakasika azy ity.
Ireo milaza azy fa mpanohitra ka afaka miteny amin’ny haino aman-jery isan-karazany dia miteny fa lehiben’ny mpanohitra, ary mankataka io fanendrena ho filoha lefitrin’ny antenimierampirenena faha -7. Isan’ny miady mafy amin’izany ingahy Ravalomanana Marc ary dia efa mitonon-tena fa lehiben’ny mpanohitra izy isakin’ny miseho vahoaka sy manao fanambarana. Heveriny fa toa ny raharaha fanonganam-panjakana tamin’ny taona 2001 angahy ity raharaha ity ka hanaovany fanendren-tena indray.
Raha ny lalàna teo aloha 2011-013 mahakasika ny mpanohitra ity dia izay atolotrin’ny mpanohitra ka eken’izy rehetra no lany ho filohan’izy ireo na tsy depiote aza. Dia veloma hatreo indray izany ny revirevin’ingahy Ravalomanana Marc ho filoha lefitrin’ny antenimierampirenena indray. Azo inona fa raha ny fitiavan’ingahy Ravalomanana Marc ity fahefana dia tsy handa velively izy raha tendren’ingahy Andry Nirina Rajoelina ho minisitra ao amin’ny fitondrana ankehitriny io. Niarahana nahita fa izy no mpanolotsaina voalohany ny vadiny Lalao Ravalomanana tamin’ny manda farany teo amin’ny ben’ny tanàna teto Antananarivo renivohitra. Ary hatramin’izao fotoana itenena izao dia mbola misy mpiambina manaraka azy ka mbola mampiasa ireny jiro maroloko fampiasan’ny filoha ny andrimpanjakana ireny izy. Misy mihitsy aza no milaza fa marary fitondrana sy voninahitra ity filoha teo aloha ity.
Iza amin’ireo mpanohitra ireo indray izany izao no ho filohan’ny mpanohitra, ka hitazona ny toeran’ny filoha lefitrin’ny antenimierampirenena? Telo no izy ireo no miady izany dia Hanitra Razafimanantsoa na Razarapiera Fidel dia ny depiote Tim lany tao Antsirbe Jean François Michel.